Obbo Baqqalaa Garbaafaa hidhaa dabalataa ji'a jaha itti murtaa'e - BBC News Afaan Oromoo
Manni Murtii Waliigalaa Federaalaa damee Lidataa dhaddachi yakkaa 4ffaa Obbo Baqqalaa Garbaafi hoggantoota paartii KFO sadi isaan waliin himataman irratti hidhaa dabalataa ji'a jaha murteesse.
Sababni "wayita maqaan keessan waamamu owwaachuu fi ka'uu diddan" jechuu yoo ta'u adabbichi seera yakkaa keewwata 449/2 eeruun kenname.
Manni murtichaa kanaan duras dhaddacha jeeqxan jechuun Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Addisuu Bullaallaa fi Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti murtee ji'a jaha dabarsuun isaa ni yaadatama.
"Afaaniin jira hin jenne, dhaabbattanii nan kabajne yoo ta'e malee, wayita maqaan isaanii waamamu harka baasanii jiraachuu isaanii mul'isaniiru" kan jedhan abukaatoon Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Abduljabbaar Huseen dabalataanis nuyi warri isaan bakka buune dhiyaachuu isaanii dubbanneerra jedhu.
Armaan duras wayita ragaafi iyyata adda addaa dhiyeeffannu himatamtoonni nu waliin dhaabachaa hin turre, yeroo kaanis yeroon callisanii harka baasuu qofaan jiraachuu isaanii mul'isan tureera jedhu Obbo Abduljabbaar.
"Manni murtii sababuma barbaadee tarkaanfii kana fudhates," jedhu.
Dhaddacha jeequun wanta hojii mana murtiicha gufachiiseefi kabaja mana murtichaaf jecha waan seera keessa taa'e malee kabaja dhunfaa abbootii seeraaf miti kan jedhan Obbo Abduljabbaar, "ol ka'anii nun kabajne jedhanii murtee akkasii dabarsuun sirni haqaa biyyattii hagam gadi bu'aa ta'uu agarsiisa" jedhaniiru.
Mana murticha irraa abdii tokkollee akka hin qabne kan dubbatte maatii Obbo Addisuu Bulaallaa kan taate Halkamee Xuuraa murtichatti gadduu ishee BBC'tti himtee jirti.
Manni murtichaa Guraandhala 28'tiif beellama biroo qabatee jira.
Ka'anii dhaabatan malee waan hojjennee dhufne ibsu hin dandeenyu jedhan, tarii hojjetaniis hin dhufne ta'a kan jedhan Obbo Abduljabbaar, dhimma kana irratti murtee irra gahuufi gahuu dhabu wanti ibsame hin jiru jedhaniiru.
Obbo Baqqalaa Garbaa bakka yaalii fooyyee itti argachuu danda'anitti deemanii akka hin yaalamne dhorkamani jedhu maatiin isaanii.
Pirezidaant Somaaliyaa haaraan Hasan Sheek Mohaammud eenyu?
Balaa ibiddaa to'achuuff bishaaniitti fayyadamuun kan hin gorfamneef yoom?
Naannoon Amaaraa meeshaa waraanaa galmeessuu jalqabuufi
'Godinaalee Oromiyaa garagaraatti wal waraansi ija addunyaa jalaa dhokfamee gaggeeffamaa jira' - KFO
Sababniifi furmaanni qaala'iinsa gatii lammiilee Itoophiyaa qoraa jiru maali?
Gosa kaansarii kutaalee Oromiyaa muraasa miidhaa jiru quba qabduu?
Faannoon eenyu? Kaayyoon isaawoo? Eenyutu duuba jira?
Raashiyaan warshaa oomisha konkolaataa Renault dhaalte
Piriimer Liigiin Ingiliiz baranaa akkamiin xumurama?